नवराजकी प्रेमिका मल्लको मोवाइल नवराजसँग कसरी आयो? नवराजको दिदिले खुलाईन् भित्रि कुरा (भिडियो) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/नवराजकी प्रेमिका मल्लको मोवाइल नवराजसँग कसरी आयो? नवराजको दिदिले खुलाईन् भित्रि कुरा (भिडियो)
मृतकको शव हेरेर मात्र अनुसन्धान गर्न पीडित परिवारको मागअनुसार शव हेरेर अनुसन्धान थालिएको समितिका संयोजक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । शुक्रबार नै छानबिन टोली रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका– ८ सोतीमा जाने प्रजिअ पन्तले जानकारी दिए ।
उच्चस्तरीय समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत, एसएसपी जनक भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धानका सहअनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्का, उपसचिव वशिष्ट घिमिरे र उपसचिव माधव ढकाल सहभागी छन् ।यसैबीच उच्चस्तरीय समितिलाई शुक्रबार दलित अधिकारकर्मी संघ र संगठनले निष्पक्ष छानबिन गर्न भन्दै ६बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको अधिकारकर्मी पार्वती विकले बताइन ।
सुस्मीताको अन्तीम ड*र लाग्दो भिडीयो बाहिरीयो मन दरो हुनेले मात्र हेर्नु होलो सुस्मीता रुदै (हेर्नुहोस भिडियो)